AUKEY Weputara chaja ohuru ohuru na nyocha di omimi | Akụkọ akụrụngwa
AUKEY bụ otu n’ime ụdị akara ama ama na batrị ma ọ bụ chaja. Ha nwere ọtụtụ chaja, ezubere iji rụọ ọrụ nke ọma ma na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ anyị n'ụzọ kachasị mma. Companylọ ọrụ ahụ na-eweta ọkwa cha cha ọhụrụ, nke ezubere iji ya na ekwentị ma ọ bụ laptọọpụ.
A na - egosipụta chaja ise ọhụrụ na ọkwa AUKEY a. Ha niile were teknụzụ di omimi dị omimi. Ekele ya, a na-achọpụta ya mgbe enwere ngwaọrụ ejikọrọ ma ọ bụ mgbe enwere abụọ, na-ekwe ka ike nke chaja kekọrịta n'etiti ha abụọ. N'ihi ya, a na-enweta ụgwọ ọrụ ka mma.
1 AUKEY USB C Mains chaja na nchọpụta di omimi
2 AUKEY USB C chaja na nzipu ike 3.0 & Dynamic Detect
3 AUKEY USB C chaja 60W
4 AUKEY USB C chaja na GAN
5 AUKEY USB C chaja 60W
AUKEY USB C Mains chaja na nchọpụta di omimi
Ihe nlereanya mbu bu chaja nke a, nke ahụ na-enye ohere ibu 30W. A ga-eji ya na ekwentị dakọtara ma ọ bụ laptọọpụ. Chaja a nwere jiri ọkọlọtọ USB na nnyefe ike 3.0 mepụtara maka ịgba USB-C na ngwaọrụ USB. Na mgbakwunye, anyị nwere ike iji ọdụ ụgbọ mmiri abụọ n'otu oge, na-enye ohere ọbụlagodi na nke a, ejiri ngwaọrụ nke 18W kwadoo ngwaọrụ.
Ekele ya ọ ga-ekwe omume ịnụ ụtọ ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye, ọ dakọtara na nnukwu nhọrọ nke ekwentị mkpanaaka na ahịa. Ihe chaja AUKEY a bu ebughibu, ìhè na kọmpat chaja, nke anyị nwere ike iji n'ụlọ, ma werekwa anyị na ezumike n'oge niile. Mfe ibufe
Nke a chaja AUKEY nwere ike ịbụ zụta na ọnụahịa nke euro 30,99 na Amazon, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
AUKEY USB C chaja na nzipu ike 3.0 & Dynamic Detect
Chaja nke abụọ yiri nke gara aga. Na nke a o nwere abụọ USB-C ọdụ ụgbọ mmiri, nke ga-enye anyị ohere ịna-akwụ ụdị ngwaọrụ niile, dịka ekwentị. Ọzọ uru bụ na ọ bụ dakọtara na a nnukwu nso nke igwe, si gam akporo ụdị ka iPhone ụdị. Chaja a na-enye anyị ike nke 36W.
N'ihi otu ihe ahụ anyị nwere ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ abụọ n'otu oge, nke ga - eme ike 18W na nke a. Ọ ka bụ oke nhọrọ iji kwụọ ngwaọrụ ngwa ngwa. Na mgbakwunye, dịka ọ pere mpe ma tụọ obere, anyị nwere ike iburu ya mgbe niile, ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ njem. Ọ dị ezigbo mma na nke a.
Ihe nlere nke ohuru nke chaja AUKEY, anyi nwere ike Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
AUKEY USB C chaja 60W
Chaja nke atọ na ọkwa ọhụrụ a site na AUKEY bụ ike USB chaja. Ọ na-abịa na ọkọlọtọ USB na nnyefe Ike 3.0 na ewepụtara iji kwụọ USB-C na ngwaọrụ USB rụọ ọrụ nke ọma. Site na chaja a, anyị nwere ike ịnweta ụgwọ 60W, nke enwere ike iji ya na ọdụ USB-C n'oge niile. N'ihe banyere ịchọrọ ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ abụọ n'otu oge, anyị nwere ike iji ya 45W nke nnyefe ike mgbe ị na-eji ọdụ ụgbọ mmiri abụọ n'otu oge.
Ọ bụ kọmpat, fechaa na dị mfe iji nlereanya, dị ka anyị na-ahụ na ụdị ụlọ ọrụ a. Ọ na-enye ya ohere iburu ya ebe ọ bụla anyị chọrọ. Ọzọkwa, chaja a Ọ nwere a mpịachi njikọ na-eme ka ọ bara uru na obere. Ọ bara uru maka ịgba ụgwọ n'ụlọ, n'ọfịs ma ọ bụ na ọ laa.
Anyị nwere ike ịzụta ya ugbu a na Amazon, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., ọnụ ahịa euro 49,99.
AUKEY USB C chaja na GAN
Chaja nke anọ n'ime ọkwa a nke AUKEY pụtara maka iji ya la teknụzụ GaN dị elu. Nkà na ụzụ a bụ ihe na-enye ohere iji nweta ụgwọ ngwa ngwa. Ya mere enwere ike iji ya na ọtụtụ ụdị dịka MacBook Pro, iPhone XS, XS Max, XR, Nintendo Switch ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ dakọtara na USB-C.
Chaja a na-enye anyị ohere ịnweta ụgwọ a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, yana 60W nke ike, mana na-enweghị nnukwu ibu. N'oge niile ọ na-ejikọ otu kọmpat kọmpat. Nwere ike iji ya gaa ebe niile, na akpaazụ, akpa ma ọ bụ akpa. Na mgbakwunye, e mepụtara ya n'ụzọ na-egbochi ngwaọrụ ịbịaru oke ugbu a ma ọ bụ gbochie ha iwe oke ọkụ mgbe ha na-akwụ ụgwọ.
Pricegwọ ya na-abụkarị ọnụahịa nke euro 42,99. Ọ bụ ezie na nwa oge enwere ike zụta ya na Amazon maka naanị 34,99 euro, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Nkeji ise chaja nwere ike ịbụ ụdị kachasị elu na nso a site na AUKEY. Ọ bụ chaja nwere ike nke 60W, ma nwee ọdụ ụgbọ USB-C abụọ. Ya mere, anyị nwere ike ịgba ụgwọ ngwaọrụ abụọ dakọtara n'otu oge, ma ha bụ ekwentị ma ọ bụ laptọọpụ. Nnukwu uru ọ na-enye anyị bụ na anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ laptọọpụ na ekwentị n'otu oge, mana na-enweghị ma emetụta ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ nwayọ.
Kọmpat imewe na anyị na-ahụ na mpaghara a ka dịkwa na ya. Ya mere, egosiri na ọ bụ nnukwu nhọrọ mgbe ị na-aga njem. Fechaa, obere na ike. Na mgbakwunye na ịnwe oke nchekwa, na-ezere oke oke ọkụ ma ọ bụ oke oge.
Chaja a dị na ọnụahịa nke euro 59,99 na Amazon, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » AUKEY gosipụtara chaja chaja ise mara mma maka ekwentị mkpanaaka na laptọọpụ